Varairidzi Vokurudzira Hurumende Kuti Ivadzivirire Kubva kuCovid-19 Panovhurwa Zvikoro
Masangano ePTUZ neZIMTA ari kukurudzira hurumende kuti ipe varairidzi nevadzidzi zvipfeko zvekudzivirira coronavirus panovhurwa zvikoro.
Masangano evarairidzi, anoti reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, neZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, ari kukurudzira hurumende kuti ione kuti panovhurwa zvikoro varairidzi nevadzidzi vanenge vakadzivirirwa kuti vasabatwe nechirwere che coronavirus.
Masangano aya ari kukurudzira kuti pave nemichina yekuti vakwanise kuongororwa kuti vane hutachiwana here kana kuti kwete muzvikoro zvose uye kuti muve nezvikwanisiro zvose zvinodiwa mukudzivirira chirwere ichi.
Masangano aya anoti atora danho iri zvichitevera mashoko ekuti bazi rezvedzidzo rinotarisira kuwana mvumo kubva kumutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa yekuti zvikoro zvivhurwe, asi hapasati pave nenguva chaiyo yekuti zvingavhurwa riini.
NeMuvhuro PTUZ yakanyorera kumunyori webazi redzidzo ichipa zvainofunga kuti zvingabatsira mukuenda mberi panyaya yedambudziko rechirwere cheCovid-19 nebandiko redzidzo.
Mutungamiri wePTUZ, Doctor Takavafira Zhou, vanoti kunyora kwavakaita tsamba iyi kunotevera kukokwa kwavakaitwa nemunyori mukuru mubazi ravo kuti vapewo pfungwa dzavo pamusoro pedambudziko iri.
Doctor Zhou vanoti kana hurumende yakavhura zvakare zvikoro panguva iyo panenge pasati pave nekujeka kuti nyika iri kuenda mberi here kana kuti kwete mukurwisana nechirwere ichi, inenge yarasika zvikuru.
Vanotiwo sezvo vabereki vasiri kukwanisa kuenda kumabasa nekuda kwekumbovharwa kwenyika kana kuti lockdown, hurumende inofanirwawo kuita kuti vabhadhare chidimbu chepakati chemari dzechikoro kotoro inouya, sezvo vachiona vabereki vasiri kukwanisa kubhadhara mari dzose.
Ukuwo, sangano reZIMTA svondo yapera rakanyorerawo mutungamiri wenyika, VaMnangagwa, richisvitsawo pfungwa dzaro pamusoro pekuti zvikoro zvingadzivirirwa sei kubva ku coronavirus.
Zvikoro zvaifanirwa kunge zvichivhurwa musi wa 5 Chivabvu, asi hurumende haisati yatara zuva razvichavhurwa.
Doctor Zhou vanotiwo vari kukurudzira hurumende kuti ione kuti zvikoro zvose zvinenge zviine mvura senzira yekuchengetedza hutsanana munguva ino yedambudziko reCoronavirus.